ယခင်အစိုးရ အဆက်ဆက် စီစဉ်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၄၁ဝဝဝ ကျော် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး စီမံက? - Yangon Media Group
ယခင်အစိုးရ အဆက်ဆက် စီစဉ်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၄၁ဝဝဝ ကျော် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေး စီမံက?
ယခင်အစိုးရ အဆက်ဆက်စီစဉ်ထားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၄၁ဝဝဝ ကျော် ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးစီမံကိန်းများမှာ စာရွက်ပေါ်တွင်သာရှိနေ သေးကြောင်း လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က ပြောသည်။ ဇွန် ၄ ရက်နေ့ ပြည်သူ့လွှတ် တော်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင် မြင့်မေးမြန်းသည့် ကန်ပေါက်ဒေသ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကျောက်ဖြူမြို့ တွင်ဆောင်ရွက်မည့် လျှပ်စစ်စီမံကိန်းလေးခုအပေါ် ပွင့်လင်းမြင် သာမှုရှိစွာမည်သို့ဆောင်ရွက်ထား ကြောင်းမေးခွန်းကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကဖြေကြားစဉ် ယင်းသို့ထည့် သွင်းပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများကို ပြည်တွင်း ပြည်ပပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များ ပါဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ယခင်ခေတ်အဆက်ဆက်က MoU, MoA, JVA စသည့် စာချုပ်ပေါင်း ၃ဝ၊ စီမံကိန်းပေါင်း ၅ဝ ရှိပြီး ယင်းတို့မှ ထွက်ရှိလာမည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၄၁၈၃၇ ဒသမ ၄ဝ ထုတ်လုပ်ရရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း ယနေ့အထိ အကောင်အထည်မဖော်နိုင် သေးကြောင်း၊ ယခုမှစတင်အကောင် အထည်ဖော်ပါကလည်း အနည်းဆုံး ရှစ်နှစ်မှ ၁ဝ နှစ်ကြာမှ ပြီးစီးမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။ ”ကျွန်တော်တို့ အစိုးရတက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း လျှပ်စစ်ပြဿနာကို မဖြေရှင်းလို့မရပါဘူး။ ယခင် ခေတ်အဆက်ဆက်က မဂ္ဂါဝပ် ၄၁ဝဝဝ ဟာလည်း စာရွက်အပေါ် မှာသာရှိနေပါတယ်။ လက်တွေ့ ဘာမှမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့တာ ဝန်ယူတဲ့အချိန်မှာ မဂ္ဂါဝပ် ၃ဝဝဝ ပါပဲ။ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပါပဲ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် ကမ်းလွန်သဘာ ဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းများဖြစ်သည့် ရတနာ၊ ရဲတံခွန်၊ ရွှေစီမံကိန်းနှင့် ဇောတိကစီမံကိန်းများဖြင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုဗပေ ၄ဝ၈ သန်း အသုံးပြုကာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမဂ္ဂါဝပ် ၁၄၉၆ ထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်း ၂ဝ၂၁ ခုနှစ်မှစပြီး ဓာတ် ငွေ့ထွက်ရှိမှုလျော့နည်းလာမည့်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေး စက်ရုံများကို အဆင့်ဆင့်ရပ်ဆိုင်း ရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး၌ စုစုပေါင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ မဂ္ဂါဝပ်၃ဝဝဝ သာရှိကြောင်း၊ ယင်းကြောင့် LNG ဓာတ်ငွေ့ဝယ်ယူကာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ မှုခင်းသတင်းထောက် အသင်းသည် မီဒီယာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ ကျင့်ဝတ်နှင့် စည်းကမ်းတို့က
ယာဉ်ရပ်နား စခန်းများ၏ ဝင်ကြေးများကို ဒီဂျစ်တယ် စနစ်ဖြင့် ကောက်ခံသွားမည်
အမေရိကန်ဆီယက်တဲလ်မြို့ လူစည်ကားချိန်၌ သေနတ်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်၊ နှစ်ဦးသေဆုံး၊ နှစ်ဦးဒဏ်ရာရ
အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်း မဟုတ်သေးဟု မန်စီးတီးနည်းပြ ဂွာဒီယိုလာ ကြွေးကြော်